ကျောင်းသားများအတွက် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းပြီး ခွန်အားဖြစ်စေနိုင်မယ့် အစားအသောက်များ
မကြာခင်မှာ စာမေးပွဲဖြေတော့မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းလေးတွေရော အခုလက်ရှိစာမေးပွဲဖြေနေကြတယ့် ညီငယ်ညီမငယ်လေးများရော စာမေးပွဲပေါ်မှာပဲ အာရုံထားပြီး နားချိန်မရှိလောက်အောင် စာတွေကျက်မိနေ မယ်ထင်တယ်။
စာမေးပွဲနီးပြီဆိုရင် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဖျားနာခြင်း တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ကတော့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဥာဏ်ကောင်းပြီး ကျန်းမာခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ အစားအသောက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးမှာ Vitamin B နဲ့ Vitamin C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီးတော့ ပရိုတင်းဓာတ်အများဆုံး အသီးဖြစ်တဲ့ အတွက် မှတ်ဥာဏ်ရော၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုပါ တိုးတက်စေပါတယ်။
ကြက်ပေါင်းရည်ဟာ ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်အတွက် အားပေးပြီး အစာချေဖျက်အားကို ကောင်းစေပြီး
အစားအသောက်ဓာတ်မတည့်တာတွေလည်း ပျောက်ကင်းစေပြီး အရိုးအဆစ်တွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။
Recommended for you - အောင်ဆန်းရှင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သေခဲ့တယ်
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥအနှစ်မှာ Choline ဓာတ် အများကြီးပါဝင်လို့ မှတ်ဥာဏ်ကို အားပေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းကိုလည်း ထုတ်ပေးတယ်။
Broccoli (ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) မှာ Vitamin K နဲ့ Choline တို့ ပါဝင်လို့ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်စေပါတယ်။
Salmon မှာ omega-3 fatty acids ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ကို ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်စေပြီး မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအား တိုးတက်စေပါတယ်။
Recommended for you - ဘယ်အသက်အရွယ် ရောက်ရောက် မရပ်တန့်သင့်တဲ့ အလုပ် (၈)မျိုး ..!
Dark Chocolate က ဦးနှောက်ထဲ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အားပေးလို့ ဥာဏ်ကောင်းစေပါတယ်။
Beet Root ဟာ ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိပြီး ဦးနှောက်ထဲ သွေးလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လို့ ခွန်အားကိုရော၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ အားပေးပါတယ်။
တရုတ်နံနံဟာ Antioxidants များစွာ ပါဝင်ပြီးတော့ ကယ်လိုရီတော့ အတော်နည်းတဲ့ အစားအစာ တစ်ခုပါ။
အဆစ်အမြစ်နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပြီး Vitamin တွေ အများကြီး ပါဝင်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အိမ်မှာအနီးကပ်စာပြပေးနိုင်မယ့် ဆရာတစ်ယောက်ကို အလိုရှိနေပါ သလား။ sayar.com.mm တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာများနှင့် မိတ်ဆက်ထားပေး ပါတယ်။ ဆရာ တွေရဲ့ profile တွင် ပါရှိသော ဖုန်းနံပါတ်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
သင်ကိုယ်တိုင်က သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်များတွင် အချိန်ပိုင်း tutor အဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်တော်တို့ sayar.com.mm နှင့် လက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။ အခုပဲ အခမဲ့ register လုပ်လိုက်ပါ။
မကွာခငျမှာ စာမေးပှဲဖွတေော့မယျ့ တက်ကသိုလျဝငျတနျးလေးတှရေော အခုလကျရှိစာမေးပှဲဖွနေကွေတယျ့ ညီငယျညီမငယျလေးမြားရော စာမေးပှဲပျေါမှာပဲ အာရုံထားပွီး နားခြိနျမရှိလောကျအောငျ စာတှကေကျြမိနေ မယျထငျတယျ။
စာမေးပှဲနီးပွီဆိုရငျ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ခေါငျးကိုကျ၊ ဗိုကျအောငျ့၊ ဖြားနာခွငျး တဈခုမဟုတျ တဈခု ကတော့ ခံစားရတတျပါတယျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားအတှကျ ဉာဏျကောငျးပွီး ကနျြးမာခှနျအားဖွဈစတေဲ့ အစားအသောကျမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ထောပတျသီးမှာ Vitamin B နဲ့ Vitamin C ကွှယျဝစှာ ပါဝငျပွီးတော့ ပရိုတငျးဓာတျအမြားဆုံး အသီးဖွဈတဲ့ အတှကျ မှတျဉာဏျရော၊ အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးကိုပါ တိုးတကျစပေါတယျ။
ကွကျပေါငျးရညျဟာ ဦးနှောကျမှတျဉာဏျအတှကျ အားပေးပွီး အစာခဖြေကျြအားကို ကောငျးစပွေီး
အစားအသောကျဓာတျမတညျ့တာတှလေညျး ပြောကျကငျးစပွေီး အရိုးအဆဈတှေ ကနျြးမာသနျစှမျးစပေါတယျ။
Recommended for you - အောငျဆနျးရှငျပွီး ကြှနျတျောတို့ သခေဲ့တယျ
ကွကျဥ၊ ဘဲဥအနှဈမှာ Choline ဓာတျ အမြားကွီးပါဝငျလို့ မှတျဉာဏျကို အားပေးပွီး ပြျောရှငျမှုကို ဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျးကိုလညျး ထုတျပေးတယျ။
Broccoli (ပနျးဂျေါဖီစိမျး) မှာ Vitamin K နဲ့ Choline တို့ ပါဝငျလို့ ဉာဏျရညျထကျမွကျစပေါတယျ။
Salmon မှာ omega-3 fatty acids ပါဝငျပွီး ဦးနှောကျကို ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျစပွေီး မှတျဉာဏျစှမျးအား တိုးတကျစပေါတယျ။
Recommended for you - ဘယျအသကျအရှယျ ရောကျရောကျ မရပျတနျ့သငျ့တဲ့ အလုပျ (၈)မြိုး ..!
Dark Chocolate က ဦးနှောကျထဲ သှေးလညျပတျမှုကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဦးနှောကျရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကေို အားပေးလို့ ဉာဏျကောငျးစပေါတယျ။
Beet Root ဟာ ကငျဆာကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ အစှမျးသတ်တိလညျး ရှိပွီး ဦးနှောကျထဲ သှေးလညျပတျမှုကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျလို့ ခှနျအားကိုရော၊ စှမျးဆောငျရညျကိုပါ အားပေးပါတယျ။
တရုတျနံနံဟာ Antioxidants မြားစှာ ပါဝငျပွီးတော့ ကယျလိုရီတော့ အတျောနညျးတဲ့ အစားအစာ တဈခုပါ။
အဆဈအမွဈနာကငျြမှုတှကေို သကျသာစပွေီး Vitamin တှေ အမြားကွီး ပါဝငျလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ အစားအစာတဈခု ဖွဈပါတယျ။
သားသားမီးမီးလေးတှအေတှကျ အိမျမှာအနီးကပျစာပွပေးနိုငျမယျ့ ဆရာတဈယောကျကို အလိုရှိနပေါ သလား။ sayar.com.mm တှငျ အတှအေ့ကွုံရှိသော ဆရာမြားနှငျ့ မိတျဆကျထားပေး ပါတယျ။ ဆရာ တှရေဲ့ profile တှငျ ပါရှိသော ဖုနျးနံပါတျသို့တိုကျရိုကျဆကျသှယျပွီး စုံစမျးနိုငျပါတယျခငျဗြ။
သငျကိုယျတိုငျက သငျ့ရဲ့အားလပျခြိနျမြားတှငျ အခြိနျပိုငျး tutor အဖွဈလုပျဆောငျရနျ စိတျဝငျစားပါက ကြှနျတျောတို့ sayar.com.mm နှငျ့ လကျတှဲဖို့ဖိတျချေါလိုကျပါစေ။ အခုပဲ အခမဲ့ register လုပျလိုကျပါ။
Read 9425 times Last modified on Tuesday, 13 February 2018 17:17
ယခင်ကထက် သင့်မှတ်ဥာဏ်တော်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက် (၇) ချက် ပြုလုပ်ကြည့်ပါ